युवा बिकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले शुरु ग¥यो इन्टरनेट बैकिङ्ग सेवा शुरु | नेपाली जनता :: Nepali Janta: Nepali News Portal
युवा बिकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले शुरु ग¥यो इन्टरनेट बैकिङ्ग सेवा शुरु
प्रकाशित मिति २९ पुष २०७४, शनिबार २१:१८ लेखक Nepali Janta
काठमाडौं । सहकारीको भिडमा छोटो समयममा नै आफनो बेग्लै पहिचान बनाउन सफल युवा बिकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई मोबाइल बैंकिङ र रेमिटेन्स लगायतका सुविधा प्रदान दिने भएको छ ।
स्थापनाको दोस्रो बार्षिक साधारण सभा भब्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ । स्थापनाको दोस्रो बर्षमै सहकारीले आफ्ना शेयर सदस्यलाई १५ प्रतिशत बोनस दिन सफल भएको छ ।
काठमाण्डौको न्युरोडमा रहेको युवा बिकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको साधारण सभाको अवसरमा बिभिन्न क्षेत्रमा रहेर उत्कृष्ट योगदान दिने कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो । उत्कृष्ठ कर्मचारीमा आस्मा बिष्ट लगायत ६ जनालाई सम्मान गरिएको थियो ।
Post View Count: 96
कांग्रेस विबाद चुलीयो, विवाद बाहीर आउने डरले प्रधानमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसी पत्रकारलाई मात्र इन्ट्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले गृहजिल्ला डडेल्धुरामा छन् । कांग्रेस सभापति समेत रहेका देउवा उम्मेदवार छनौटको विषयलाई लिएर…
‘प्रेमबहादुर सिंह किन भएनन् समानुपातिक सांसद ?’
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय समाजवादी जनता पार्टी विलय गराउँदै माओवादी केन्द्रका नेता भएका पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहको मुद्दामा सुनुवाइ…
प्रमोद सिटौला:- म काँग्रेस भएकै कारण एनआरएनको कुनै पनि कमिटीमा वस्न नपाउने भनियो किन ?
अमेरीका । ४ दिन थपिएको समयमा एनआरएनका ३ हजार सदस्य बढेको मितीदेखि धेरै साथीहरुलाइ सकस भयो। एनआरएन अमेरिकाको सदस्यहरु…
वाम गठबन्धनका उम्मेदवार हराउन दुई डीएसपी परिचालित, नवराज सिलवाल र अनिल शर्मा निशानामा !
काठमाडौं । निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई हराउन उच्च प्रहरी अधिकारीहरु नै…